Levitikọs 9 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Erọn chụrụ àjà (1-24)
9 N’ụbọchị nke asatọ,+ Mosis kpọrọ Erọn na ụmụ ya ndị nwoke nakwa ndị okenye Izrel. 2 Ọ gwara Erọn, sị: “Kpụrụ otu nwa ehi ị ga-eji chụọ àjà mmehie maka onwe gị+ nakwa otu ebule ị ga-eji chụọ àjà a na-esu ọkụ. Ha ga-abụ ndị ahụ́ dị mma. Ị ga-ewetakwa ha n’ihu Jehova. 3 Ma ị ga-agwa ndị Izrel, sị, ‘Kpụtanụ otu mkpi a ga-eji chụọ àjà mmehie nakwa otu nwa ehi na otu nwa ebule, ndị gbara otu afọ otu afọ, ndị ahụ́ dị mma, ka e jiri ha chụọ àjà a na-esu ọkụ. 4 Kpụtakwanụ otu oké ehi na otu ebule a ga-eji chụọ àjà udo,+ ka a chụọ ha n’àjà n’ihu Jehova. Wetakwanụ àjà ọka+ a gwara mmanụ, n’ihi na Jehova ga-apụta n’ihu unu taa.’”+ 5 Ha ji ihe niile Mosis nyere ha n’iwu ka ha weta bịa n’ihu ụlọikwuu nzute. Nzukọ ahụ niile wee bịa guzoro n’ihu Jehova. 6 Mosis wee sị: “Ọ bụ ihe a ka Jehova nyere unu n’iwu ka unu mee, ka Jehova wee gosi unu ebube ya.”+ 7 Mosis sịziri Erọn: “Gaa n’ebe ịchụàjà chụọ àjà mmehie maka mmehie gị+ nakwa àjà ị ga-esu ọkụ ma kpuchie mmehie gị+ na mmehie ezinụlọ* gị. Chụọkwara ndị Izrel àjà ha+ ma kpuchiere ha mmehie ha,+ otú Jehova nyere n’iwu.” 8 Erọn gara n’ebe ịchụàjà ozugbo gbuo nwa ehi o ji achụ àjà mmehie maka mmehie ya.+ 9 Ụmụ Erọn ndị nwoke wee butere ya ọbara+ nwa ehi ahụ, ya arụnye mkpịsị aka ya n’ọbara ahụ ma tee ya na mpi ndị dị n’ebe ịchụàjà. Ọ wụsakwara ọbara fọrọ afọ n’ala ebe ịchụàjà.+ 10 O suru abụba si n’anụ ahụ o ji achụ àjà mmehie nakwa akụrụ ya abụọ na abụba kpuchiri imeju ya ọkụ ka ha kwụọ anwụrụ ọkụ n’ebe ịchụàjà, otú Jehova nyere Mosis n’iwu.+ 11 Ọ kpọkwara anụ ya na akpụkpọ ya ọkụ n’ebe dị anya n’ebe ha mara ụlọikwuu.+ 12 O gbuziri anụ a ga-eji chụọ àjà a na-esu ọkụ. Ụmụ Erọn ndị nwoke wee bunye ya ọbara ya, ya efesa ya n’akụkụ niile nke ebe ịchụàjà.+ 13 Ha bunyere ya anụ ahụ e gburiri egburi a ga-eji chụọ àjà a na-esu ọkụ, bunyekwa ya isi ya, ya esuo ha ọkụ ka ha kwụọ anwụrụ ọkụ n’ebe ịchụàjà. 14 Ọ sakwara eriri afọ ya na ụkwụ ya ma suo ha ọkụ ka ha kwụọ anwụrụ ọkụ n’elu anụ e ji chụọ àjà a na-esu ọkụ nke dị n’ebe ịchụàjà. 15 O wee chụọ àjà ndị Izrel wetara. Ọ kpụụrụ ewu a ga-eji chụọ àjà mmehie maka ndị Izrel gbuo, were ya chụọ àjà mmehie otú o mere nke mbụ ahụ. 16 Ọ kpụtakwara anụ a ga-eji chụọ àjà a na-esu ọkụ ma chụọ ya otú e nyere iwu ka e si na-achụ ya.+ 17 E wepụ àjà a na-esu ọkụ+ ọ chụrụ n’ụtụtụ,+ ọ chụkwara àjà ọka. O kpooro ọka juru ọbụ aka ya ma suo ya ọkụ ka ọ kwụọ anwụrụ ọkụ n’ebe ịchụàjà. 18 Erọn gbuziri oké ehi na ebule e ji achụrụ ndị Izrel àjà udo. Ụmụ ya wee bunye ya ọbara anụ ndị ahụ, ya efesa ya n’akụkụ niile nke ebe ịchụàjà.+ 19 Ha weere abụba oké ehi ahụ,+ ọdụ ebule ahụ nke bụ́ abụba abụba, abụba kpuchiri eriri afọ ha, akụrụ ha, na abụba kpuchiri imeju ha,+ 20 ma tụkwasị abụba niile ahụ n’elu okpuru afọ* anụ ndị ahụ. O suziri abụba ndị ahụ ọkụ, ha akwụọ anwụrụ ọkụ n’ebe ịchụàjà.+ 21 Ma Erọn fegharịrị okpuru afọ* anụ ndị ahụ na ụkwụ aka nri ha ka ha bụrụ àjà a na-efegharị efegharị n’ihu Jehova, otú Mosis nyere n’iwu.+ 22 Erọn wee chee ndị Izrel ihu, chịlie aka ya gọzie ha.+ O sikwa n’ebe ahụ ọ nọ chụọ àjà mmehie na àjà a na-esu ọkụ na àjà udo gbadata. 23 N’ikpeazụ, Mosis na Erọn banyere n’ụlọikwuu nzute. Ha pụtakwara gọzie ndị Izrel.+ Jehova wee gosi ndị Izrel niile ebube ya.+ 24 Jehova zitere ọkụ,+ ya amalite irepịa àjà ahụ a na-esu ọkụ na abụba ndị ahụ dị n’ebe ịchụàjà. Mgbe ha niile hụrụ ya, ha malitere iti mkpu ma gbuo ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala.+
^ Ma ọ bụ “ebo.”
^ Ma ọ bụ “gburugburu obi; mkpunala.”